अालुको मूल्य दोब्बर वृद्धि, किन वढ्यो आलुको भाउ ?::Hamrodamak.com
अालुको मूल्य दोब्बर वृद्धि, किन वढ्यो आलुको भाउ ?
कालिमाटीबाट राजधानीका साना–ठूला बजार र पसलमा लगेर बिक्री हुने आलु प्रतिकिलो सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
काठमाडौं । भान्सामा सबैभन्दा धेरै खपत हुने आलुको मूल्य आकासिएको छ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले नयाँ आलुको खुद्रा मूल्य न्यूनतम ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकेको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारीले लेखेका छन्।
चार महिनाको अबधिमा आलुको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएको हो। आलुको भाउ थोकमै वढ्दा खुद्रा मूल्य वढेको व्यापारीहरुले बताएका छन्।
नेपालमा भारत, बंगलादेश र भुटानबाट आलु आयात हुन्छ। नेपालको आफ्नो उत्पादनले तीन महिना पनि धान्दैन।
तिहारपछि स्वदेशी आलु बजारमा आउने भएकाले मूल्य घट्ने व्यवसायीले बताएका छन्।